को को न्यायाधीश तोकिए, पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा ? «
को को न्यायाधीश तोकिए, पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा ?
प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ११:३८
मुन्धुमस्टार डटकम – संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । संसद् विघटनलगायत विषयमा परेका ३० रिटको सुनुवाइ गर्न राणाले संवैधानिक इजलासमा आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा ११ रिटको पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ। बाँकी १९ रिटको सुनुवाइ क्रमश हुनेछ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले विघटनसम्बन्धी १९ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै ती सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक भन्दै
सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। संसद्‌मा रहेका पाँच दलका १४६ सांसदहरूले विघटन खारेज गर्न र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्‍त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै गत सोमबार रिट दायर गराएका छन्। रिटमा संसद् विघटन खारेजी गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।